ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် Apartment Sale In Thingangyun (ID-267), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)
1250 sqft apartment area for sale in Thingangyun Township. Apartment has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Apartment with three air-conditioners.
Sale Price - 950 Lakh (Nego).
Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော ရောင်းရန် တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၂၅၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် သုံးလုံးအသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။
တိုက်ခန်း၏အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၉၅၀ (ညှိနှိုင်း)
သင်္ဃကျွန်းရှိရောင်းရန် တိုက်ခန်း (ID-267)
Property ID: S-1182393
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဓမ္မာရုံလမ်း ( ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ပြည်သာယာလမ်းတို့အနီး ) ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော တိုက်ခန်း ( Malihku Real Estate )
No(97) thu da tha na(2) street 16/2 quarter thingangyun
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ အပိုင်း(၂) ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ကြီးပွါးရေးအိမ်ယာရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ် (၁၆)ရပ်ကွက်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
ရတနာလမ်းနှင့် သုမင်္ဂလာလမ်းအနီးရှိ နေထိုင်ရန်သင့်တော်သော မြေညီ တိုက်ခန်းကျယ်
AKK shoping mall အနီး လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်ရှိအသင့်နေတိုက်ခန်းကျယ်
LayDaungKan Road (လေးထောင့်ကန်လမ်းမ)
Code-7552 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ် တိုက်ခန်း အရောင်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
San Pya Street (စံပြလမ်းသွယ်)
Code-7448 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် မြေညီဟောင်ကောင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သီရိဟေမာလမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ၅လွာတိုက်ခန်း ( Malihku Real Estate)
Code-7298 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ထပ်ခိုးပါ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဇောတိကလမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောမြေညီတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
Shweproperty ID: S-1182393